Uzulu waseMaphisa ngezansi yeMandebeleni ukhuthazwa ukuba ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kuCovid 19 phansi kohlelo lwabesibhedlela seMaphisa District bencedisana labasebenza kwezempilakahle kungela mbadalo abeCommunity Health Workers, olujonge ukubona ukuthi zonke izakhamizi zihlabe leli jekiseni njalo zithole ulwazi ngobhubhane lolu.
UMatron Mathonsi wesibhedlela seMaphisa District Hospital uthi benza konke okusemandleni abo ukufinyelela ebantwini bebahlaba ijekiseni elivikela iCovid-19.
''Njengoba silomkhankaso wokuhlaba iCovid-19 indlebe zethu zihlala ziphansi silinde ukuya emcimbini lalapho okuhlangana khona abantu ukuze sibahlabe ijekiseni elivikela ukubamba iCovid-19, siyabancedisa ukuthi bahlabe sibalethela eduze sibancedisa leCovid protocol lapha savunyelwa ukuba size sizohlaba abantu.''
UMatron Mathonsi ukhuthaza abantu ukuba behlale bethwele amakhadi abo okuvikela igcikwane ukuze bahlabe wonke amajekiseni.
''Lamhla lapha emcimbini lo sesenelise ukuhlaba abantu abadlula amatshumi amabili siyabonga ngoba besingakholwa ukuthi sizathola abahlabayo esikucelayo yikuthi abanye batshiye amakhadi abo ukuze bahlabe okwesithathu kodwa inengi elihlala eduze lokhe lisiyawalanda bezohlaba. Ngakho sibakhuthaza ukuthi bebowathwala bezohlaba uma kulemicimbi lemihlanagno ngoba siphakathi kohlelo lokuhamba sihlaba''
Udubo olubhekane leZimbabwe yikuba amajekiseni la ayaphela amandla uma engasebenzanga, uMatron Mathonsi uthi emizameni yokumelana laloludubo sebelanda abantu duze lamakhaya lasemicimbini.
''Udubo olukhona manje yebo silabo abalamaBp kodwa okwamanje sigijimisa ukuba sisebenzise amajekiseni okuvikela iCovid-19 ngaba ale shelf life engahlala engasebenzanga akumelanga siwahlabe abantu uma esephelelwe yisikhathi sokuwasebenzisa siyahlaba ngoba siphakathi komkhankaso izwe lonke wokuhlaba la majekiseni.''
UNkosikazi Sethusiwe Ndlovu ongomunye osebenza kungela mbadalo phansi kwenhlanganiso eyeCommunity Health Volunter uthi bahamba befundisa abantu ngeCovid-19 lezigubhu gear emakhaya.
''Sinceda abantu ngokuthi babelesigubhu gear emakhaya ukuze bavikele iCovid-19 kodwa uhlupho esesibhekane lalo yikuba abantwana abasahloniphi lokhe beke bamba ukuya esikolo sebengamahlongandlebe inengi labo.''
uNkosikazi Chelesani Mdlongwa osuka eZamanyoni ngohlelo lweCommunity Health Worker uchasisa ngomsebenzi wabo.
''Mina ngingu Community Health Worker sihamba sinceda abantu ngokuba lesigubhu gear, sibapha amasanitizer kanye lokuweya abantwana abaleminyaka engaphansi kwmihlanu kodwa kulezi insuku siqinisa umkhankaso wokuthi abantu bayehlaba bevikela iCovid-19.''
Unkosikazi Sinini Khanye osuka eMakhasa village uthi isikhathi esinengi ukhuthaza abantu ukugeza izandla lokugqoka amamask.
Okwamanje uhulumende uphakathi kohlelo lwakhe lokuphuma ijumo ukulanda abantu endaweni abakuzo ukubahlaba ijekiseni lokuzivikela kuCovid-19 njalo ekhuthaza abantu ukuba baqhubeke belandela iziqondiso zeCovid-19. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inani lababanjwa belegcikwane leli loba ukubulawa yilo lisehla okwamagama elizweni.
Udaba lwabeMaphisa Community Health Workers siluphiwa nguAnnahstacia Ndlovu